Mayelana NATHI | I-Hebei Baiyun Daily Chemical Co., Ltd.
I-Baiyun Daily Chemical
Ikhwalithi ephezulu, Ukwehlukana, Intengo Ephansi Nenzuzo Ephansi
I-Hebei Baiyun Daily Chemical Co, Ltd. eyasungulwa ngonyaka we-1997, itholakala esifundazweni saseShijiazhuang-Hebei — umbuthano wezomnotho omkhulu futhi onamandla kakhulu wokuthuthukiswa okuhlanganisiwe kwe-beijing-tianjin-hebei, yikhono lokukhiqizwa ngobuningi kwendlu yangasese ejwayelekile nephezulu insipho, insipho yokuwasha, insipho ewuketshezi, abakhiqizi bamakhishi nezindlu zangasese, inkampani inezintambo zesimanje eziyisishiyagalolunye zokukhiqiza, abasebenzi abangaphezu kwabangu-30 abaqeqeshiwe nabasebenza ezobuchwepheshe, onjiniyela abathathu abaphezulu, sebebonke abasebenzi abangaphezu kwama-200 efektri. Ngo-2012, inkampani yethu yanwebeka futhi yaqedela i-workshop yokuwasha uketshezi okuzenzakalelayo, i-aseptic yokuwasha ikhishi, indawo yokusebenzela yangasese engenazintuli kanye nomhlangano wokusebenzela insipho ongaphandle. Imikhiqizo ithengiswe kuzo zonke izifundazwe zezwe, amadolobha, izifunda kanye nezimakethe zangaphandle.
I-Baiyun yansuku zonke yamakhemikhali co., LTD ibilokhu ihambisana nomqondo wokukhiqiza we "ikhasimende eliqondiswe kumakhasimende, ikhwalithi yokusinda, eliphakeme ukunqoba, ukunemba kokusha", kusetshenziswa imidwebo yomkhiqizo oyimfashini, izinto zokusetshenziswa ezinempilo kanye nobuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukile, ukuze imikhiqizo iphephile futhi inempilo, hambisana neThe Times, eduze kwesidingo semakethe. Ngo-2009, inkampani yethu yadlula ngempumelelo i-ISO9001: 2000 isitifiketi sokuphathwa kwekhwalithi yamazwe omhlaba kanye nezitifiketi zokuphepha zekhwalithi ye-QS, futhi yabhalisa futhi yathuthukisa izinhlobo zayo: "iJingjiu express", "ruichi", "ruibai", "baiyunjiaxu", "Reebay", "Deemax" njalonjalo. Le nkampani inokukhishwa kwonyaka kwamathani ayi-10000 ensipho, amathani ayi-50000 wemikhiqizo yokukhiqiza imikhiqizo yokuwasha.
Inqubomgomo yokusebenza kwe "high quality, diversification, amanani aphansi kanye nenzuzo ephansi" yenza inkampani yethu yakhe uhlelo oluphezulu, oluphakathi noluphansi lomkhiqizo wohlelo ukuhlangabezana nezidingo zamazwe ahlukene, izimakethe namaqembu abathengi. Sizobazuzisa ngempela abantu. Ngomqondo wokuphatha "wokubumba isithombe ngaphandle nokuqinisa ikhwalithi ngaphakathi", inkampani yethu iklonyeliswe ngeziqu ezihloniphekile ze- "intengo yeyunithi ethembekile", "ikhwalithi yomkhiqizo iyunithi ethembekile", "ibhizinisi lebhizinisi le-AAA" kanye "nomkhiqizo omuhle wekhwalithi" iminyaka eminingi.
"Letha imikhiqizo yeBaiyun ezinkulungwaneni zamakhaya emhlabeni wonke" ukuphishekela kwethu okuqhubekayo komqondo wokuthengisa, imikhiqizo yethu eChina ukugcina ukusebenza kahle kokuthengisa, futhi manje sesisungule ngempumelelo inethiwekhi yokuthengisa yomhlaba wonke, inethiwekhi imboze iNingizimu Melika, EYurophu, e-Afrika, e-Oceania, eningizimu-mpumalanga ye-Asia naseMpumalanga Ephakathi. Sineqembu lokukhiqiza insipho eliqeqeshiwe, abasebenzi bokuthengisa abangochwepheshe, abaxhumanisi abangochwepheshe ngemuva kokuthengisa, abazimisele ukusebenzisa imikhiqizo yethu esezingeni eliphakeme, kumakhulu ezigidi zemindeni emhlabeni jikelele. Sibheke phambili ekusebenzeni namakhasimende womhlaba wonke ukwakha ikusasa elingcono.